Ngwaahịa Factlọ ọrụ, Ndị na - ebubata ya - Ndị na-emepụta ngwaahịa China
Cummins Inc., onye ndu ike uwa nile, bu ulo oru nke ndi otu azumahia na-aruputa, meputa, kesaa ma jeere injin na oru ndi ozo yiri ya, tinyere sistemu mmanu, njikwa, njikwa ikuku, nzacha, mmezi oku na igwe eletrik. Isi ụlọ ọrụ dị na Columbus, Indiana (USA), Cummins na-ejere ndị ahịa ozi ihe dị ka mba na mpaghara 190 site na netwọkụ nke ihe karịrị ụlọ ọrụ 500 na ndị nkesa nọọrọ onwe ha na ihe dịka 5,200 ndị na-ere ahịa.
MTU bụ otu n’ime ndị na - emepụta ụwa nke nnukwu mmanụ dizel na akụkọ ihe mere eme ya nwere ike ịchọtakwa n’afọ 1909. Ya na MTU Onsite Energy, MTU bụ otu n’ime ụdị ahịa Mercedes-Benz Systems na ọ bụ mgbe niile ka ọ na-ebute ụzọ nke nkà na ụzụ ọganihu. MTU Engines bụ ezigbo moto ịchụ mmanụ mmanụ dizel.
Igosipụta obere mmanụ ọkụ, ogologo oge ọrụ yana obere anwuru, Sutech MTU generator diesel na-ejikarị ya eme ihe na mpaghara njem, ụlọ, telecom, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, ụgbọ mmiri, ubi mmanụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe wdg.
Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (SDEC), yana SAIC Motor Corporation Limited dị ka onye na - ekenye ya, bụ nnukwu ụlọ ọrụ nwere teknụzụ nwere steeti na - eme nyocha na mmepe yana imepụta injin, akụkụ injin yana usoro jenerato, nwere ụlọ ọrụ nchịkwa steeti, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ postdoctoral, usoro mmepụta nke akpaka ụwa na usoro mmesi obi ike nke na-ezute ụkpụrụ ụgbọ ala. Ya na mbụ bụ Shanghai Diesel Engine Factory nke hibere na 1947 ma wezigharịa ya na ụlọ ọrụ na-ekenye ngwaahịa na 1993 yana mbak A na B.
Volvo usoro gburugburu ebe obibi nsụhọ Gen Set nke ya iyuzucha emission soro EURO II ma ọ bụ EURO III & EPA ụkpụrụ. Ọ bụ VOLVO PENTA na-eji mmanụ ụgbọala mmanụ mmanụ dizel nke ndị VOLVO PENTA a ma ama na Sweden mere. E guzobere akara VOLVO na 1927. Ruo ogologo oge, akara ya siri ike jikọtara ya na isi atọ ya: ogo, nchekwa na nlekọta gburugburu. T
Usoro ZBW (XWB) nke ụdị igbe igbe AC ​​na-ejikọta akụrụngwa eletriki eletrik, ndị na-agbanwe ọkụ, na akụrụngwa eletriki dị ntakịrị ka ọ bụrụ ngwakọ zuru oke nke ngwaọrụ nkesa ike, nke a na-eji na ụlọ elu obodo mepere emepe, obodo na ime obodo. ụlọ, ebe obibi, mpaghara mmepe mmepe, teknụzụ obere na ọkara, ebe a na-egwupụta ala, mmanụ mmanụ, na ebe a na-ewu nwa oge ka eji wee nata ma kesaa ike eletrik na usoro nkesa ike.
GGD AC Igwe Voltage Ike Nkesa
GGD AC nke na-ekesa ike na-ekesa ike dị mma maka ndị ọrụ ike dị ka osisi ike, ihe ọkụkụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị ọrụ ike ndị ọzọ dị ka AC 50HZ, nke gosiri 380V voltage na-arụ ọrụ, nke dị ugbu a na usoro nkesa ike 3150A dị ka ike, ọkụ na akụrụngwa ike. , Nkesa na njikwa. Ngwaahịa a nwere ikike ịgbasa elu, akara oge dị mkpirikpi na-eguzogide ugbu a ruo 50KAa, atụmatụ elekere na-agbanwe agbanwe, ngwakọta dị mma, ike ịkpa ike, na usoro ọhụụ.
MNS- (MLS) Typedị Mpempe Mpịakọta Obere Ala
Ndị MNS ụdị ọkụ ọkụ dị ala (nke a na-akpọzi ọkụ ọkụ ọkụ) bụ ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị jikọtara na mmepe mmepe nke ọkụ ọkụ ọkụ nke ala anyị, na-eme ka nhọrọ nke ihe ọkụ eletriki ya na usoro ụlọ ọrụ dịkwuo mma, ma degharịa ndị ọzọ. Njirimara eletriki na igwe nke ngwaahịa a na-emezu ihe oru teknụzụ nke ngwaahịa MNS mbụ.
GCK, GCL Voltage Volta Withdrawable Switchgear
GCK, GCL usoro obere-voltaji withdrawable switchgear e mere site anyị ụlọ ọrụ dị ka mkpa nke ọrụ. O nwere njirimara nke usoro dị elu, ọdịdị mara mma, arụmọrụ eletriki dị elu, ọkwa nchebe dị elu, nchekwa na ntụkwasị obi, na ndozi dị mma. A na-eji ya na ọla, mmanụ na ụlọ ọrụ kemịkal. Ọ bụ ezigbo ngwaọrụ nkesa maka usoro ike ọkọnọ obere ọrụ na ụlọ ọrụ ndị dị ka ọkụ eletriki, igwe, textiles na ihe ndị ọzọ. Edepụtara ya dị ka ngwaahịa akwadoro maka mgbanwe nke netwọkụ abụọ na nke itoolu nke ngwaahịa nchekwa.
Ma ulo n'ịnyịnya monoblock na mgbidi n'ịnyịnya monoblock friji unit nwere kpọmkwem otu ihe arụmọrụ ma na-enye dị iche iche echichi ọnọdụ.
Ngwunye ụlọ a na-arụ ọrụ nke ọma na-arụ ọrụ nke ọma ebe oghere ime ụlọ ahụ pere mpe n'ihi na ọ naghị etinye ohere ọ bụla n'ime.
A na-eji igbe polyurethane na-afụ ụfụfụ igbe a na-ekpo ọkụ ma nwee ezigbo ihe mkpuchi ọkụ.
Full DC inverter solar monoblock friji unit na AC / DC eluigwe na ala arụmọrụ (AC 220V / 50Hz / 60Hz ma ọ bụ 310V DC input), na unit adopts Shanghai HIGHLY DC inverter Compressor, agbanwe ugboro mbanye, na carel akara osisi, carel Electronic mgbasa valvụ, carel mgbali mmetụta, carel okpomọkụ ihe mmetụta, carel mmiri mmiri crystal ngosi njikwa, Danfoss n'anya iko na ndị ọzọ na mba ọzọ ama ika ngwa. Ngwunye ahụ na-enweta ike nchekwa nke 30% -50% ma e jiri ya tụnyere otu ike a na-etinye compressor ugboro ugboro.
Ikuku ikuku bụ ebe mgbapụta ọkụ ọkụ ikuku bụ ikuku ikuku nke ikuku na-eji ikuku dị ka isi iyi (ọkụ) na mmiri dị ka ọkara (oyi). Dika akụrụngwa akụrụngwa maka isi mmiri na oyi, igwe ikuku na-ekpo ọkụ na-ewepu ọtụtụ akụkụ inyeaka dịka ụlọ elu dị jụụ, nfuli mmiri, igwe mmiri na usoro piping kwekọrọ. Usoro a nwere usoro dị mfe, na-echekwa ohere echichi, ndozi na njikwa dị mma, ma na-echekwa ike, ọkachasị nke kwesịrị maka mpaghara enweghị ego mmiri.